देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल : व्यावसायिक फड्को र केबलकार ! - Arthatantra.com
काठमाडौं । बिहान साढे आठ बजे पानी पोखरीस्थित आइएमई कम्प्लेक्समा पुगेपछि उनले घडी हेरे र भने, ‘सरी है, मैले तपाईँहरुलाई धेरै समय त कुराइन ?’ तर त्यतिबेला साढे आठ बज्न दुई मिनेट बाँकी नै थियो ।
उनले नै हामीलाई बिहान साढे आठ बजेको समय दिएका थिए । हामी त्यसको दुई मिनेटमात्र अघि त्यहाँ पुगेका थियौँ । उनी नजिकका भन्छन्, ‘समय उनलाई चिन्ने मापनजस्तै हो । समयसँग उनको कुनै सम्झौता हुँदैन ।’ उनको टिमका कर्मचारीले अहिलेसम्म उनसँग समय छल्न सकेका छैनन् । बैठक होस् या काम, उनको उपस्थिति सके अगावै नत्र समयमै हुने गर्दछ ।
जागिर छाडेर व्यावसायिक यात्रा :
उनको जागिरे जीवन करीब चार वर्ष जति रह्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा । त्यही समयमा व्यवसायको सोच र आँट पलायो र विसं २०४८ तिर सानो कोल्डस्टोर राखे । त्यसपछिको उनको व्यवसाय हो– कार्गो ।
त्यतिबेलासम्म भाइ रामु (हेमराज ढकाल, हाल आइएमई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक) पनि उनलाई साथदिन आइसकेका थिए । त्यसपछि भाइ रामु उनको हरेक व्यावसायिक जीवनको साथमा रहँदै आए ।
त्यतिबेल व्यवसायका लागि उनीहरुलाई १२/१३ लाख चाहियो । आफूले काम गर्ने बैंकमै ऋण मागे, तर कर्मचारीले ऋण नपाउने भनियो । उनले त्यसै दिन राजीनामा दिएर भने, ‘अब त दिन मिल्छ नि ?’ यसरी बैंकको जागिर छाडेर व्यवसायमा होमिएका ढकाल अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंकका अध्यक्ष छन् ।
व्यवसायमा हात हालेका ढकाल कार्गो व्यवसायलाई विदेशमा फैलाउन चाहन्थे । त्यतिबेला नेपाली तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उत्पादनको अमेरिकामा राम्रो बजार थियो ।
कार्गो व्यवसाय विस्तारका लागि उनले अमेरिका जाने तयारी गरे, भिसा पनि लाग्यो । तर, जापान भएर अमेरिका जाने योजना बनाएका ढकाल एक गाउँले दाइको आग्रहमा १० महिना जापानमै बसे र काम गरे । ‘त्यस समय जापानको रोजगारीलाई राम्रो मानिन्थ्यो, ती दाजुको आग्रह भयो र म १० महिनाजति त्यहीँ काम गरेर बसेँ । पछि अमेरिका गइनँ ।’
त्यहीँ बस्दा नै विदेशमा बस्ने नेपालीले कमाएको पैसा नेपाल पठाउँदा भोग्नुपर्ने सास्ती र जोखिम थाहा पाउने अवसर मिल्यो उनलाई । पछि भाइ हेमराज पनि सानो काम र व्यवसाय गरेर जापानमै केही समय बसे । ढकाल दाजुभाइको जापान बसाईको अनुभवको उपजले नै जन्मिउको थियो ‘आइएमई’ ।
नेपालीले विदेशमा गरेको कमाइ औपचारिक बाटोबाट ल्याउने कामको थालनी यही कम्पनीले गरेको हो । नेपालको अगुवा रेमिट्यान्स कम्पनीका रूपमा यसले रकम नेपाल भित्र्याएपछि सरकारलाई राजश्व नबढ्ने त कुरै भएन, जुन अहिले पनि आइएमई होस् या अरु कम्पनीबाट जारी नै छ ।
तर पनि त्यस समय हुण्डीमार्फत मात्र रकम नेपाल भित्रिने गरेको विकल्पमा नेपालमा पहिलोपटक यो नीतिगत व्यवस्थाको विकल्प उनीहरुले नै दिएका थिए । यसले नेपालको सामाजिक अपराध या वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपालीहरु लुटिनबाट पनि जोगाएको छ । किनभने हुण्डीको रकम हिनामिनाका घटनाले हुने गरेका आपराधिक घटनाका समाचार त हामीले विगतका वर्षहरुमा सुन्ने गरेकै हौँ ।
सरकारले सन् २००१ मा रोजगारीका लागि मलेशिया खुला ग¥यो । धेरै नेपाली गए । त्यसबेला नेपालमा पैसा भित्रिने कुनै कानूनी प्रावधान थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि अनौपचारिक माध्यमबाट रकम आउने क्रम बढेसँगै चिन्तामा थियो । ‘यही समस्याको हलका लागि हामीले हाम्रो अनुभवलाई टेकेर ‘इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस’ (आइएमई) खोल्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकसँग ग¥यौँ, जुन सफल पनि भयो ।
त्यही आइएमई अहिले नेपालको ‘मनी ट्रान्सफर’ को पर्यायवाची हो भन्दा फरक पर्दैन । अहिले मानिस पैसा पठाउन कुनै बैंकमा या अन्य मनी ट्रान्सफर कम्पनीमा पुगेका भए पनि ‘आइएमई गरिदिनुस्’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यो हाम्रा लागि ठूलो खुशी हो ।’
‘आइएमई स्थापना गर्दा हामी यो अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने चाहिँ लागेको थिएन’, उनको अनुभव छ, ‘हामीले एक खालको जोखिम नै मोलेका थियौँ भन्ने लागेको हो । तर जहाँ जति जोखिम त्यति नै सफलता पनि हात लाग्दोरहेछ । शुरुआती दिनहरुमा हामीले आइएमई खोलेका छौँ, तपाईँहरुको रकम सुरक्षितरूपमा घर परिवारसम्म पु¥याइदिन्छौँ भन्दा मानिसहरु पत्याउन पनि तयार भएनन् । तर हाम्रो इमान्दारीले विस्तारै हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो ।’
हाल आइएमई नेपालको विप्रेषण क्षेत्रको पर्याय मात्र होइन, नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको एक उदीयमान ‘ग्रुप’ पनि हो । यसले रेमिट्यान्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, अटोमोबाइल, ऊर्जा, पर्यटन, विद्युतीय भुक्तानी, ट्राभल, सूचना–प्रविधि, केबलकार र हस्पिटालिटीलगायत विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आइरहेको छ । यी सबैको जगको ढुङ्गा आइएमई नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।
ढकालले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणमा गरेका संघर्षका कथाहरु धेरैको प्रेरणाका स्रोत बन्न योग्य छन् । उनको सफलताको ओझिलो यात्रामा बटुलेका अनुभव भावी पिँढीका लागि पथप्रदर्शक मात्र होइन कि प्रयोगशाला नै बन्न सक्छन् । ढकाल दाजुभाइको सिर्जनामा स्थापित चन्द्रागिरि केवलकार छोटो समयमै राष्ट्रिय सम्पत्ति बनेको छ ।
विसं २०७३ बाट सञ्चालनमा आएको चन्द्रागिरि केबलकार नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई ‘रिट्रिट’ गराउनेदेखि लिएर महत्वपूर्ण कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने एउटा उत्तम विकल्प बनेको छ ।
ढकालले भने, ‘चन्द्रागिरि आयोजना नेपालमा नाकाबन्दी र भूकम्पले जर्जर पारेको अवस्थामा पनि समयमै सम्पन्न भएको हो र यसले मलाई लाग्छ नेपालको त्यस समयको अर्थतन्त्रको मनोबल उकास्ने काम गरेको छ ।’ हुन पनि हो, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नेपाली अर्थतन्त्र थरथर काँपेको अवस्था थियो ।
तर राजधानीमै यो केबलकारका खम्बाहरु चन्द्रागिरिको चुचुरोमा ठडिएसँगै यहाँको उद्योग क्षेत्रले पनि आफू तङ्ग्रिएको महसुस गरेको थियो । यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रको मनोबल बढाएको थियो । हाल त्यहाँ रिसोर्टदेखि विभिन्न एकीकृत पर्यटकीय संरचनाहरु बनेका छन् ।
हाल ढकाल व्यावसायिकरूपमा नेपालमा केबलकार विस्तारको योजनामा छन् । नेपालका सातै प्रदेशमा केबलकार पु¥याउने योजना छ उनको । भन्छन्, ‘केही स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौँ र कतिपयमा काम धेरै अघि बढेको पनि छ ।’ व्यवसायमा इमान्दारीको ठूलो महत्व छ । इमानबिना व्यावसाय टिक्दैन, सफल हुँदैन । अनि मेहेनत र धैर्य चाहिन्छ ।
ढकाल दाजुभाइमा यही गुण भेटिन्छ । उनीहरुलाई सफलता दिलाएको यसैले हो भन्न सकिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा ग्लोबल आइएई बैंक नै शीर्षस्थानमा छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने नीति समेटियो । सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ढकालले नै जोखिम उठाएर साहसिक निर्णय गरे ।
अमलाचौरको माया :
‘विभिन्न कार्यक्रममा होस् या मिडियाले समाचार लेख्दा आफूलाई ‘सफल व्यवसायी’ भन्ने गरेकोमा मलाई अचम्म लाग्छ । यो देशका सबै नेपाली सफल छन् । कोही कुनै काममा केही समयका लागि असफल भए पनि ती असफलताको अनुभवबाट आगामी दिन झन् सफल बनाउन सकिन्छ ’ उनको भनाइ छ । (रासस)
वि.सं.२०७६ पुस ६ आइतवार १३:३१ मा प्रकाशित
अघिल्लाे सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्नुस् त्यसमा सरकारले झण्डा गाड्छ : मन्त्री अर्याल
पछिल्लाे सिभिल बैकका कुन तहका कर्मचारीको कति तलब/भत्ता ? यस्तो छ विवरण (सूचिसहित)